शरीरबाट कसरी निस्कन्छ पसिना? – Rastriyapatrika
शरीरबाट कसरी निस्कन्छ पसिना?
अत्यधिक पसिना आउँदा शरीरमा विभिन्न प्रकारका पसिना उत्पादन गर्ने ग्रन्थीहरूले काम गरेका हुन्छन् । महिला र पुरुषले भिन्दाभिन्दै परिमाणमा पसिना निकाल्छन् । औसत प्रौढ पुरुषले हरेक दिन सोही उमेरका महिलाले भन्दा चार गुणा बढी पसिना निष्काशन गर्छन् ।
शरीरलाई बढी तातो हुनबाट जोगाउँछ
एक्सपेरिमेन्टल फिजियोलोजी नामक जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार व्यायामका क्रममा महिलाले भन्दा पुरुषले बढी प्रभावकारी ढंगले पसिना निष्काशन गर्छन् । कतिपयले धेरै पसिना आउनुलाई घट्दो फिटनेससँग तुलना गरे पनि यो सत्य होइन ।
बढ्दो व्यायामले शरीरलाई चिसो बनाउँछ । पसिनाबाट आउने पानी उडेर शरीरलाई चिसो बनाउँछ र शरीरलाई बढी तातो हुनबाट जोगाउँछ ।
पसिनालाई वंशाणुगत तत्वले पनि प्रभाव पार्छ
पसिना निकाल्ने ग्रन्थी दुईवटा
तर, एप्रोक्राइन ग्रन्थी विशेष गरी पसिना र रौँ आउने अन्य स्थानमा आउँछ ।– नेपाली हेल्थ